theZOMI: [mrsorcerer:38236] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း
[mrsorcerer:38236] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအားလုံးနီးပါးလိုပင် လျှောက်ထားသူ၏ အရေးစွမ်းရည်ကိုသာမက ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် ရှင်းပြနိုင်စွမ်း၊ တစ်ဖက်သားအား မိမိတင်ပြလိုသည်ကို စွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း စစ်ဆေးနိုင်သည့်စာစီစာကုံး persuasive or argumentative writing တစ်ပုဒ်တော့ ဖြေဆိုရလေ့ရှိသည်။ In persuasive or argumentative writing, we try to convince others to agree with our facts, share our values, accept our argument and conclusions, and adopt our way of thinking. ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိတို့ဆင်ခြေများ၊ ယုံကြည်သည့်အရာများ၊ တန်ဖိုးများ အာဘော် များ ကောက်ချက်များ၊ စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းများအား သူတစ်ပါး လက်ခံလာအောင် ရေးသားရသည်။
၄င်းစွမ်းရည်သည် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရုံ စာမေးပွဲအောင်ရုံ သာတန်ဖိုးရှိသည် မဟုတ်ပါ။ ၀န်ထမ်းအစ နိုင်ငံရေးသမားအဆုံး မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရမည့် လူမှုစွမ်းရည်တစ်မျိုး ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရေးသားနည်းကို လေ့လာထားသင့်သည်။
clarifying relevant values ဆီလျော်သည့်တန်ဖိုးများကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်နားလည် အောင်ရှင်းပြနိုင်ခြင်း မိမိအမြင်၊ သူ့အမြင် နှိုင်းယှဉ်ကာမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရမည်။
forming and stating conclusions နိဂုံးကောက်ချက် တည်ဆောက်တင်ပြခြင်း"ထို့ကြောင့် . . . ဤသို့သာဖြစ်သင့်ကြောင်း" မိမိ၏အမြင်ကိုတင်ပြတတ်ရမည်။
"persuading" စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခြင်းစာဖတ်ပရိတ်သတ်အား မိမိတင်ပြသည့်ကောက်ချက်များသည် အများလက်ခံထား သော ကျိုးကြောင်းသင့်အချက်အလက်များနှင့်တန်ဖိုးများအပေါ်တွင် အခြေခံထား ပါသည်ဟု နားလည်လက်ခံလာအောင် ဆွဲဆောင်တတ်ရမည်။
အချက်အလက်များကို စာရင်းပြုစုပါ။ အရေးကြီးလျှင်ကြီးသလို အစီအစဉ်နေရာချ၊ ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို "ဘာလိုသေးသလဲ" ဟူသည့်မေးခွန်းမေးပါ။
နိဂုံးချုပ်လျှင် တင်ပြခဲ့သမျှကို အတိုချုံးပြောပါ။ ပြီးလျှင် ဆက်စပ်ကာ "ထို့ကြောင့် . . . ဤသို့ဖြစ်သင့်သည်" ဟုကိုယ့်အာဘော်ကိုတင်ပြပါ။ နိဂုံးချုပ်စာကြောင်းသည် နိဒါန်းရှိ ပဓာနအာဘော်ကို ပြန်ထင်ဟပ်ပါစေ။ မိမိတင်ပြခဲ့သမျှသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှု ရှိမရှိ ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
မိမိရေးထားသည်ကို ပြန်ဖတ်ရှုပါ။ "အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လား။ စာဖတ်သူကကော လက်ခံပါ့မလား။ သူတို့ မိမိဆိုလိုသည်ကို နားလည်ပါ့မလား" စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါ။
Read more: စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A857926&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2SrnjL51v
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 5/11/2013 12:30:00 AM